Na quseyso anaga – Advokatbyrån Divinius
Na quseyso anaga
JURISTBYRÅN DIVINIUSWaxaan macaamiisheena ku dhejin karnaa meesha ugu horeysa
Na quseyso anaga Sharciga ayaan ka aragnaa muuqaal kale
Shirkada la dhaho Juristbyrån Divinius waxeey xafiiskeeda ilbaabaha u furtay 31 oktoobar 2016. Divinius waa erey oo luqada latiinka oo micnaheeda waa sidii alle camal – oo anaga waxaa rajeyneynaa in taasna ey meheradeena oo dhan ey ka muuqato.
Anaga waxaa dooneynaa inaa ahaano shirkad qareen oo ilbaxsan iyo fudud oo wax sahlan ka dhigno arrimaha sharciga iyo ka dhigno mid uu qofkasto shaqsi ka qeyb-qaadankaro. Anaga weey noo muuqataa inaa danta dadka aan u adeegeyno waxkasto ka horumarineyno. Taasna waxaa kamid inaa firfircoonahay iyo qiimaha kharashka fahansanahay iyo isla markaasna anaga nahay dad aqoon leh iyo fahansan tayada. Anaga hadefkeena waa inaa markasto na laga helo talo sharci oo firfircoon iyo tayad leh iyo qofka u noqon karno qareen markey noqoto arrimaha oo dacwo maxkamad aan ku shaqo lee nahay.
Adiga hoostan baa ka akhrisankartaa shaqaalaha xafiiskaan ka shaqeeyo. Fadlan nala soo xiriir haddii aad dooneysid inaa su’aalo na weeydiisid ama haddii aad dooneysid inaa wakhti ballansatid oo kulanka koowad oo wada tashiga!
Ma waxaad raadineysaa la ixtiraamo oo loo qoondeeyey qareen?
Waxaan bixinnaa talada ugu wanaagsan ee sharciga ku saabsan shuruudaha tartanka.
Emma waxeey haysataa shahaado aqoonta sharciyada oo waxeey ka soo qaadatay jaamacada Lund. Ayada waxeey usoo shaqeyn jirtay shirkada qareen oo la dhaho Advokatbyrån Limhamnsjuristen oo taal Malmö iyo shirkadii ugu dambeysay oo la dhaho Familjens jurist oo taal Kristianstad oo waxeey ka eheed maamulaha xafiiska.
Isku daba ridka maamulkaCharlotta Sjösten
Talefoon: 044-10 09 90
Fakiska: 044-10 09 33